स्किम होइन बलियो गाडी किन्नुस्-... :: सेतोपाटी संवाददाता :: Setopati
स्किम होइन बलियो गाडी किन्नुस्- करुण शाक्य
सवारी साधनको कुम्भ मेला मानिने नाडा अटो शो को १३ संस्करण राजधानीको भृकुटीमण्डपमा संचालन भइरहेको छ।
अटो शोमा विभिन्न कम्पनीका सवारी साधन, सवारी सुरक्षा प्रविधि, टायर, लुब्रिकेन्ट्स्, स्पेयर पार्टस्, नयाँ प्राविधि, ब्याट्री, ग्यारेज उपकरण तथा अन्य एसोसेरिजहरू राखिएको छ।
नेपाली अटोमोवाइल क्षेत्रमा लामो अनुभव बटुलेको सिजि मोटोकर्पले पनि तामझामको साथ आफ्नो गाडी प्रर्दशनी गरिरहेको छ। नाडा शो कै सन्दर्भमा सिजी मोटोकर्पका सिनियर मार्केटिङ म्यानेजर करुण शाक्यसँग हामीले कुराकानी गरेका छौं ।
नाडा शो हेर्न किन आउने ?
नाडा शो एकै ठाँउमा धेरै गाडी हेर्न पाउने प्ल्याट फर्म हो। अरू बेलामा गाडी हेर्न जादाँ धेरै शो–रूम धाउनुपथ्र्यो भने नाडा शोमा सबै कम्पनीको गाडी एउटै ठाउँमा हेर्न पाइन्छ। एक–दुई घण्टामा सबै कम्पनीका सबै गाडी हेर्न सकिन्छ। त्यस्तै नाडा अटो शोमा सबै कम्पनीहरुले राम्रो अफर पनि दिएका छन् । यसको लाभ ग्राहकले उठाउन सक्छन् ।
यो वर्ष ग्राहकहरुको आकर्षण कस्तो गाडीमा पाउनु रहेको पाउनुभयो ?
धेरै आकर्षण त प्यासेन्जर कारमै छ। त्यस्तै एसयुभीहरूमा पनि छ। सवै भन्दा उल्लेखनिय कुरो विद्युतीय सवारी साधनमा पनि रूची देखिएको छ।
सुजुकीले किन यसपाली विद्युतीय गाडी प्रदर्शनमा किन नल्याएको होला ?
भारतमा विद्युतीय गाडीहरूको टेस्टिङ भइरहेका छन्। त्यहाँ केही ‘क्लिनर भेइकल’ सार्वजनिक पनि भइसकेका छन्। सुजुकी पनि यो रेसमा पछाडि चाहीँ छैन। भारतमै त भखर्रै सुरू हुदै छ।
त्यस्तै पछिल्लो समय हामीले भारतमा निर्मित गाडीहरू मात्र ल्याएका छौँ। नाडा शोमा अधिकांश विद्युतीय गाडी तेस्रो मूलुकबाट ल्याइएको हो। हामी विद्युतीय गाडी पनि भारतमा निर्मित नै ल्याउने हो। भारतमा निर्मित गाडी नेपालको बाटो सुहाउँदो हुन्छ। त्यसकारण हामी सिधै बेच्नेगरि मात्र विद्युतीय गाडी ल्याउँछौ।
सुजुकीले यो वर्ष कुन गाडीलाई धेरै फोकस गरिरहेको छ ?
हामी भर्खर्रै सार्वजनिक भएको ‘ थर्ड जेनेरेसन स्विफ्ट’ मा बढी फोकस छौ। अवलोकन कर्ताहरूले पनि यसलाई निकै रुचाइरहनु भएको छ। हामी उत्साहित छौँ।
नाडा शोमा सुजुकीको गाडी बुक गर्दा ग्राहकलाई के फाइदा छ ?
हामीले पर्वोत्सव स्किम लन्च गरेका छौ। ‘पर्वोत्सव’ अफर अन्तर्गत उपभोक्ताले २ लाख रुपैयाँसम्म नगद छुट, स्क्रयाच कुपनमार्फत १ लाख रुपैयाँसम्म अतिरिक्त छुट, १ लाख रुपैयाँ सम्म एक्सचेन्ज बोनस र नाडा विशेष छुट पाउनु हुने छ।
यो अटो शोमा सुजुकीका कति गाडी बुकिङ हुन्छ भन्ने आशा छ ?
अटो शोमा ६० हजार भन्दा धेरै अवलोकनकर्ता आउने अनुमान नाडाको छ। त्यस्तै नाडा अटो शो भरी सुजुकीका ५–६ सय गाडी बुकिङ गर्ने लक्ष्य छ।
अन्तिममा गाडी खरिद गर्न चाहनेहरुलाई के भन्नुहुन्छ ?
गाडी किन्दा सवै कम्पनीहरूले स्किम दिन्छ, त्यो आफ्नो ठाँउमा छ। त्यो भनेको सुरूमा किन्दा खेरीको कुरा हो। सुजुकी गाडीको केसमा कस्ट अफ वनरसिप सस्तो छ। गाडी किन्नु भन्दा पाल्नु गाह्रो कुरा हो। हाम्रो गाडीले माइलेज राम्रो दिन्छ। गाडी बलियो छ, मेन्टेनेन्स कस्ट कम छ, स्पेयर पाट्स सस्तो छ, यी कारणले गर्दा ग्राहकको वनरसिप सस्तो पर्न जान्छ। अन्तिममा म के भन्न चाहन्छु भने गाडी किन्दा स्किम होइन बलियो गाडी छान्नुपर्छ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, भदौ २९, २०७५, ०१:३५:००